Fankalazana – FJKM Ambavahadimitafo Fankalazana |
Ny alahadin’ny Zanaka am-pielezana dia hotanterahina eto amin’ny fiangonana ny 26 janoary 2013 amin’ny 9 ora maraina. Koa manasa anareo zanaka am-pielezana rehetra mba hiara hiombom-bavaka amin’izany fotoana manokana izany.
Publié le 18 décembre 2013 à 03:12
Ny fankalazana ny krismasy dia tanterahina ny alarobia 25 desambra 2013 amin’ny 9 ora tahaka ny mahazatra eto amin’ny fiangonana. Ireo rehetra izay maniry hanolotra vatomamy noho izany krismasy izany dia afaka manantona ny mpandraharaha ao amin’ny trano fisainana.
Fankalazana.Volana sy Kintana
Krismasy fifaliana 2013
Publié le 07 décembre 2013 à 07:12
Toy ny fanao isan-taona dia tanterahina ny alahady 22 Desambra 2013 ao anatin’ny fotoam-pivavahana maraina ny krismasin’ny ankizy izay karakarain’ny Volana sy Kintana, eto amin’ny fiangonana Ambavahadimitafo. Izany moa dia hiarahana amin’ny sampana samihafa eto amin’ny fiangonana : Sekolin’ny Tenin’Andriamanitra (STA), Taninketsa, AFFA, STK, SAMPATI. Manasa antsika rehetra hiara hankalaza ny Krismasy miaraka amin’ireo zanatsika
Ho fanomanana ny fo amam-panahintsika ho amin’ny Krismasy dia hisy ny herinandron’ny Fiadanana izay karakarain’ny Asa Fitoriana ny Filazantsara. Maro ny mpandahateny hifandimby amin’izany ka handinihana indrindra ny lohahevitra hoe « ny fiadanana », amin’ny lafiny teolojika, sosiolojika, ekonomika, sosialy… Hanomboka ny Alatsinainy 02 desambra ka hatramin’ny 06 desambra 2013, isaky ny amin’ny 6 ora sy sasany